Alumni Shack - I-Airbnb
I-Alumni Shack ikwikona engasentla ntshona yeKhampasi yeYunivesithi yaseHarding kufutshane nendlu yekofu ye-Starbucks. Ukuba ufuna indawo eyongezelelekileyo i-Alumni Cottage kunye ne-Alumni Shack zinokudityaniswa njengendawo enexabiso elithotyiweyo.
Igumbi elinefenitshala lixhotyiselwe ukurenta ebusuku, ngeveki nangenyanga.
Irenti ibandakanya ikhitshi, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela (elimiswe njengegumbi lehotele) elingaphaya kwesitalato ukusuka kwikhampasi yeYunivesithi yaseHarding. Isilingi iphezulu inegalelo kumoya ophangaleleyo.
4.96 · Izimvo eziyi-184
Yintoni esahlulayo, kukuba sikumgama wokuhamba ukuya eStarbucks, Midnight Oil Coffee House, Subway, College Church of Christ, Slader's Alaskan Dumpling Company & Harding University Campus! Indawo yaseHarding Cafe kunye neZiko laBafundi zikwibhloko enye ecaleni kwendlela. Kukho ukhetho oluninzi kwinkundla yokutya yaseHarding kuquka i-Einstein Brothers Bagels, iChick-fil-A, iTaco Bell, kunye nePanda Express. Kukwakho nevenkile ekwikhampasi ekwiziko labafundi.
Nceda uzive ukhululekile umbhalo okanye unditsalele umnxeba nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho ukuba ufuna nantoni na.
Siliqela elinobubele kwaye sinosapho oluninzi ngamaxesha onke, siyakonwabela ukudibana nabantu abatsha!